AF / MJS: sarotiny amin’ny fomba fiasan’ny MJS ny sendikà | NewsMada
AF / MJS: sarotiny amin’ny fomba fiasan’ny MJS ny sendikà
Olona afaka mamaly ny hetaheta sy ny filàn’ny mpikatroka ara-panatanjahantena no tokony hipetraka eo amin’ny toeran’ny Minisitra mitantana ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Io no nambaran’ny sendika ny mpiasam-panjakana eo anivon’ny minisiteran’ny tanora sy ny fanatanjahantena, omaly, tetsy Mahamasina. Nanamafy izy ireo fa saro-piaro amin’ny fomba fiasan’ny MJS hotendrena eo satria ny zava-dehibe loatra, ny fampandrosoana ny fanatanjahantena.
Takin’ireo sendika ny AF/MJS (Agents Fonctionnaires du Ministère de la Jeunesse et des Sports) ihany koa ho an’izay Minisitra vaovao ho eo ny hanatsaràna ny lafiny fanendrena mpiasa. Tafiditra ao anatin’izany fangatahana izany ny fanomezana asa ho an’ny mpikambana eo anivon’ny sendikà sy ireo nivoaka avy amin’ny ANS (Académie nationale des Sports). Eo ihany koa ny fialana amin’ny fanendrena ho mpiasa ny namana akaiky sy ny olom-pantatra ary ny kolikoly eo amin’izay fampidirana mpiasa izay. Tokony hesorina ihany koa hoy izy ireo izay mpiasa tsy nahomby.
Nandritra ity tafa nifanaovana tamin’ny mpanao gazety ity no nanararaotana ny fiarahabana ny filoham-pirenena vaovao Rajoelina Andry ary nirariana soa ho azy izay nataon’ny Sekretera Jeneraly ny Sendika ny mpiasam-panjakana eo anivon’ny MJS, Ramaroson Seth.